Global Voices teny Malagasy · 8 Aogositra 2017
08 Aogositra 2017
Tantara tamin'ny 08 Aogositra 2017
Ilay Vehivavy Saodiàna Nitondra Rivodoza Raha Nandray Familiana
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana08 Aogositra 2017
Tsy zavatra mora ny manala ny fandraràna mamily fiara any Arabia Saodita.
Nakatona ny Bilaogy Bahrainita Malaza!
Efa ofisialy fa hosakanana avy hatrany ny bilaogin'i Mahmood (http://mahmood.tv), noho ny baikon'ny Minisiteram-Baovao Bahrainita. Miaraka amin'ireo tranonkala 6 hafa.
Ahoana ny Hanampiana ireo Niharam-Boinan'ny Fihovitrovitry ny Tany tao Indonezia
Afaka mitsidika ny bilaogin'i Merlyna Lim ankehitriny ireo mpikambana ao amin'ny firaisamonina iraisam-pirenena izay miahiahy tanteraka manoloana ny horohorontany tao Indonezia, izay tafakatra 5.000 ny maty ary an'arivony marobe no naratra, manangona am-pivitrihana momba ny adiresin'ireo sampan-draharaha marobe ao Indonezia sy iraisampirenena manao fanampiana ny bilaoginy.
Miala tsiny noho ny fiadan'ny herinandro, na izany aza, raha te hamaky resadresaka mahaliana momba ny natioran'i Kurdistan ara-jeografika ianao, jereo ireo fanehoan-kevitra farany ao amin'i Kurdistance.
Sahisahy Loatra Ny ‘Despacito’ Hoy Ny Tambajotra Fampitam-baovaom-panjakana Ao Malezia
"Amin'ny fandraketana, mahatsiravina ahy ilay hira. Kanefa ny sivana tsy mahavita manao na inona na inona hampandrosoana ny firenena..."